WAR DEG DEG AH:Madaxweynaha Puntland oo goor dhoweyd ka baxay Aqalka Madaxtooyada & Taliska Ciidamada Puntland oo uu…. – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH:Madaxweynaha Puntland oo goor dhoweyd ka baxay Aqalka Madaxtooyada & Taliska Ciidamada Puntland oo uu….
March 16, 2019 Puntland PL
GAROWE(P-TIMES)- Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Denni ayaa goor dhoweyd xariga ka jaray haamaha kaydka shidaalka ee garoonka diyaaradaha ee Garowe General Maxamed Abshir Garoowe oo si casri ah loo qalabeeyey.
Intaas kadib madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Denni ayaa u dhaqaaqay booqasho uu ku tegey saldhigga iyo xabsiga weyn ee magaalada Garowe si uu ugu kuurgalo xaalada dhabta ah ee ka jirta iyo qaabka ay u shaqeeyaan saraakiisha gacanta ku haysa xabsiga.
Madaxweynaha oo ay weheliyaan xubno katirsan golaha xukuumadda Puntland iyo saraakiisha ciidamada ayaa qayb qayb u booqday saldhiga iyo taliska guud ee ciidamada Booliska dowladda Puntland ee magaalada Garowe oo uu uga sii gudbay xasbiga weyn.
Siciid Cabdullaahi Denni ayaa dhowaan bilaabay qorshe xukuumaddiisu ay ku tayeynayso noocyada kala duwan ee ciidamada dowladda oo ay Boolisku kamid yihiin, waxaana la filaaya inuu warbixino ka dhagaysto talisyada kala duwan ee ciidamada oo uu kala hadli doona adkaynta amaanka iyo difaaca Puntland.
Kooxaha Mucaaradka Oo Go`aan Wada Jir Ah ka Soo Saaray Doorashooyinka La Filayo In Somaliya Ka Dhacaan